“Somaliland waa albaabka (irrida) Taiwan ay ka gali lahayd Afrika” | Baligubadlemedia.com
“Somaliland waa albaabka (irrida) Taiwan ay ka gali lahayd Afrika”
April 14, 2021 - Written by Ahmed ALI
Somaliland iyo Taiwan: laba dhul oo saxiibo kooban leh lakiin midba midka kale leeyahay
Somaliland iyo Taiwan waa laba dhul oo leh dowlado si buuxda u shaqaynaya, oo labaduba si hanweyni leh ugu dhawaaqay madaxbanaanidooda, in kasta oo aan mid kooda haysan aqoonsi, sida ay Mary Harper ku waramaysona way isku soo dhawanayaan.
Warbixintan oo ay BBC NEWS kaga sheekaynayso xidhiidhka ugub ka ah ee Somaliland iyo jasiirada Taiwan, ayaa lagu yidhi, calanka Tiawan waxa uu si tartiib ah uga lulanayaa naacawda diiran, midab kiisa casaanka, caddaanka iyo buluuga iskugu jira ayaa ku dhacaya samada nadiif ta ah ee buluuga ah.
Inkasta oo dadka qaarkood ay xidhiidh kooda u arkaan wax layaableh, Somaliland iyo Taiwan waa qaar siyaabo badan u ah saxiibo dabiici ah.
Ka cadhaysiinta China iyo Soomaaliya
Labadooduba (Somaliland iyo Taiwan) mahaystaan aqoonsi caalamiya, waxeyna leeyihiin jaarar ka balaadhan dhul ahan, oo ah Soomaaliya iyo China ku waaso ku adkaysanaya in Somaliland iyo Taiwan ay dhulal kooda kamid yihiin.
Somaliland iyo Tiawan waxay samaysteen xidhiidh dubulumaasiyadeed sanad kii hore si ay uga cadhaysiiyaan jaarar kooda (China iyo Soomaaliya).
Soomaaliya way cabaaraysay saxibtinimada Somaliland iyo Taiwan, saraakiil Shiinays ahina waxay u socdaaleen Somaliland si ay ugu adkeeyaan in ay ka noqdaan xidhiidhka Taiwan.
Waa suurogal in China u arko xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan mid caqabad ku noqonaya, qorshihiisa Belt and road intiative, kaasi oo uu China ku doonayo in uu ku horumariyo wadooyinkiisa ganacsi ee badda iyo bariga Afrika kaasi oo isku xidhaya Eeshiya, Bariga-dhexe iyo Afrika.
Somaliland oo leh dekedda istiraatijga ah ee Berbera waxay caqabad ku noqon kartaa sii socoshada wado ganacsiyeedka China ee ku teedsan xeebaha Bariga Africa.
China aya waxa dhici karta in uu si woxogaa cabsiyi ku jirto u eegayo xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan maadaama oo uu saldhigiisii millateri ee uu ubid ku yeesho meel ka baxsan ciidiisa uu ku yaalo Jabuuti oo Somaliland la jaara.
Taiwan waxay Somaliland u aragtaa talaabo deedi ugu horeysay ee rajadeeda gobolka.
“Somaliland waa albaabka (irrida) Taiwan ay ka gali lahayd Afrika” sida waxa yidhi wakiila Taiwan ee Somaliland Allen Chenhwa Lou, oo hoos fadhiya sawir ka madaxweynihiisa, Tsai Ing-wen.
“Halkan waxan Taiwan u matala 10 waddan oo Afrika ah, oo ay kamid yihiin Kenya iyo Ethiopia” ayuu wakiilku hadalkiisa sii raaciyay.
Somaliland waa dhulkii labaad ee kaliya ee Afrika ku yaala kaasi oo xidhiidh dubulumaasiyadeed oo buuxa laleh Taiwan, ka horena waa waddan ka yar ee lagu magacaabo Eswantini oo Taiwan xidhiidh la lahaa ilaa 1968.
‘Walaalka weyn ee Somaliland’
Wakiilka Taiwan ee Somaliland Lou wuxu ku qeexay xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan mid labada dhinacba kala faa’iidaysanayaan.
Taiwan waxay Somaliland ka taageerta arrimaha beeraha, tiknoolajiyada, waxbarashada, caafimaadka, doorashooyinka iyo tamarta.
Somaliland na waxay ku taala meel istiraatiji ah, oo qani ku ah kalluunka (malayga), khayraadka dabiiciga ah iyo dalxiiska.
“Somaliland waxay noogu yeedhaa walaal keedi ka weyna lakin waxan xidhiidhka Somaliland iyo Taiwan u arkaa mid ku dhisan wax is waydaarsi iyo iskaashi, Somaliland waligayba waanu wada jiri doona” ayuu yidhi Mudane Lou.
“Hada uma baahnin in aanu madaxbanaani raadsano waayo horay ayaanu u madax banaanayn, waxanu labadayaduba u baahanahay waa aqoonsi kaasi oo aanu labadayaduba wadaag no xaaladan adag” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Lou.
Lakin qof kasta oo Somaliland jooga lama dhacsana saxibka cusub ee ay heleen, waxayna is waydiiyaan in saxibtinimada China ee ay Somaliland wayday ay qiime u qalma in labixiyo.
“Laba qaawani isma qaado” sida waxa yidhi Ismaaciil Maxamed oo xoolaha ka ganacsada.
“Quwada China ayaynu uga baahi badanahay Tiawan ta yar” sida waxa tidhi Muna Adan oo ah gabadh ganacsato ah.
“Xidhiidh ka Taiwan wuxu ina tusayaa waalida Somaliland”.
“Waxan u malaynayay in Somaliland ay xaga Taiwan u jaleecayso iyadoo isku dayaysa in ay China soo jiidato, iyadoo odhanaysa hadii aad xidhiidh nala yeelan waydo Taiwan ayanu la yeelan”
“Lakiin marnaba kama filayn in ay xidiidh yeeshaan, waa qalad wayn oo aanu China marnaba iloobi doonin” ayay Muna hadalkeeda sii raacisay.
Lakin xukuumada Somaliland uma dhaqaaqayso arrintaa, kusimaha wasiirka arrimaha dibada ee Somaliland, Libaan Yuusuf Cismaan, waxa uu difaacay xidhiidhka labada dhul isagoo yidhi “waxanu wadaagnaa qiimaha dimuquraadiyada iyo xoriyad”.
“Waanu soo dhawaynaynaa waddan kasta oo Somaliland xidhiidh la yeelanaya oo Shiiinuhu ku jiro lakiin ma aqbalayno in Taiwan dibada loo tuuro China dartii” ayuu Libaan hadalkiisa ku sii daray.
Liibaan Cismaan aad ayuu ugu rajawayn yahay Somaliland isagoo yidhi “Waxanu noqon karnaa Taiwan ta Afrika. Taiwan waa sheeko guulaysatay anaguna waxaan rabnaa in aanu ku dayo habraacooda horumarka”.
Waxa uu sharaxaad ka bixiyay waddamada isasoo taraya ee xafiisyada ka furanaya Somaliland ee ay kamid ka yihiin Turkiga, Itoobiya, Jabuuti, midowga Yurub, Ingiriiska iyo Imaaraatka Carabta.
Sida Taiwan oo kale xadi dhulal ah oo aan aqoonsi haysan ayaa xiisaynaya in ay xidhiidh la yeeshaan Somaliland.
Sanadkii 2020, wakiilo ka socda boqortooyada Buurta Huruuda ah oo ku taala dhul aan cidina ku andacoon la haanshihiisa, oo u dhexeeya Masar iyo Sudan, ayaa booqday Hargaysa iyagoo ka rajo qaba in ay safaarad ka furtaan halkaa.
Somaliland waxay dhidibada u taagtay xafiis keeda Taiwan, kaasi oo uu madax kayahay Maxamed Hagi.
“Dhab ahaantii waanku raaxaystay nolosha Taipei” ayuu yidhi Maxamed Hagi.
“Cimiladu way fiicantahay, dadkuna waa kuwo aad ilbax u ah. Waxay doonayaan in ay Afrika naga bartaan”.
“Waa in aan u sharaxaa in Somaliland anay ahayn Soomaaliya, taasi oo ay la xidhiidhiyaan kaliya argagixiso iyo budhcad badeed” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Maxamed Hagi wuxu yidhi “inaan ka warqabo 3 qof oo kaliya oo reer Somaliland ah ayaanu Taiwan ku joognaa, aniga iyo laba qof oo kale oo ila shaqeeya”.
Lakinse wuxu rajaynayaa in qaar badan oo kale yimaadaan muddo dhaw, madaama oo 20 arday oo reer Somaliland ah lasiiyay deeq waxbarasho, isla markaana laga yaabo in qul qul ganacsato reer Somaliland ahi yimaadaan.
Wakiilka Taiwan ee Somaliland Lou, sheegay in uu la kulmay firkanax dhaqan (culture shock) markii uu Somaliland yimid isla markaana aanu helin wax yabo badan oo uu waddamada kale ka heli jiray.
Lakiinse wuxu la qabsaday in uu ku raaxaysto fudaydka nolosha Somaliland.
Lou wuxu ka sheekeeyay sida qof kastaaba ugu malayn jiray in uu China ka yimid markii ugu horaysay ee uu Somaliland yimid.
“Waxan jecelahay in aan wadooyinka lugeeyo kadibna qofkasta wuxu igu odhan jiray “Chin” ana waxan ku odhan jiray may Taiwan ayan ka imid kadibna sida ayay ku baran jireen” ayuu yidhi Lou.
“Lakiin shaqo badan ayaa wali inoo dhiman, “inan yar oo aan 5 sano kawaynayn ayaa ii timid anoo xeebta Berbera jooga kadibna intay farta igu soo taagtay ayay tidhi “Covid-19” ana waxa ku idhi maya Taiwan ayan ka imid lakin ma ogi in ay fahantay” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Lou.
Waa xili hore in la sheego in saxiibtinimada labadan dhul ee aan la aqoonsanayni ay ka caawin doonto doonitaan kooda aqoonsi caalamiya, iyo in xidhiidh koodu noqon doono mid labadooduba ka wada faa’iidaan iyo inta ay kicin doonto Soomaaliya iyo China.
Lakin labadooduba waa laba qaran oo shaqaynaya oo aan aqoonsi uun haysan, waxayna wadagaan doonitaan kooda aan la dhaqaajin karin ee ah in ay sida kusii wadaan.
Turjumadii: Cabdilaahi Cabdiraxmaan Sh, Maxamed